अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको ओइरो, नेपाल टप लिष्टमा... | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
सिड्नी । अष्ट्रेलियाले यो वर्ष हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भित्र्याएकोछ ।
अष्ट्रेलिया सरकारले अर्थतन्त्र सुधार्ने उदेश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको भिसा सहजीकरण गर्दै हालसम्माकै सबैभन्दा बढी वद्यार्थी भित्र्याउन सफल भएको हो ।
हालै अष्ट्रेलियन सरकरले जारी गरेको तथ्यांकका अनुसार यो वर्ष सबैभन्दा बढी ७ लाख ८ हजार विद्यार्थीले अष्ट्रेलियाका विभिन्न शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका छन् । यो संख्या अघिल्लो वर्षको यहि अवधिको भन्दा १३ प्रतिशतले बढी हो । विभिन्न शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका कुल संख्यामध्ये विश्वविद्यालयमा करिब ३ लाख ३८ हजार विद्यार्थी भर्ना भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको यहि अवधीभन्दा १५ प्रतिशतले बढी हो ।
नेपालबाट कति ?
अष्ट्रेलिया पढ्न आउने अधिकांश विद्यार्थी एसियन मुलका रहेका छन् । तथ्यांक अनुसार छिमेकी मुलुक चीनबाट सबैभन्दा बढी विद्यार्थी अष्ट्रेलिया अध्ययनका लागि आउने गरेका छन् । त्यस्तै चीनलाई पछ्याउँदै भारत दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने भारतको पछिपछि नेपाल रहेको छ । चीन र भारतबाट आउने अधिकांश विद्यार्थी गुणस्तरीय उच्च शिक्षाका लागि आउँछन् । नेपालबाट भने अधिकांश विद्यार्थी त्यहाँको राजनीतिक परिस्थितीबाट आजित भएर संभावनाको खोजी गर्दै अष्ट्रेलिया आउने गरेका छन् । त्यसपछि भियतनाम, मलेसिया, भियतनाम, पाकिस्तान, इण्डोनेसिया, हङकङ लगायतका देशबाट अधिकांश विद्यार्थी अष्ट्रेलिया भित्रने गरेका छन् ।
विद्यार्थी अष्ट्रेलियन अर्थतन्त्रको खम्बा
अष्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई भरपर्दो आर्थिक स्रोतको माध्ययम बनाएको छ । अघिल्लो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुले अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा करिब २८ अर्ब डलर बराबरको योगदान पुर्याएको तथ्यांक छ भने यो वर्ष त्यो बढेर ३० अर्ब डलर भन्दा बढी पुगेको अनुमान छ । आम्दानी अष्ट्रेलियाको प्रमुख आम्दानीका स्रोत कोइला र फलाम खानीबाट हुनेपछिको तेस्रो हो ।
यो वर्ष अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी बढ्नुलाई बेलायतको युरो जोनबाट बर्हिगमन र अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अप्रवासीप्रति लिएको नीतिलाई मुख्य कारण मानिएको छ ।
तर अष्ट्रेलियाका प्रोफेसरहरुभने अष्ट्रेलियाको गुणस्तरीय शिक्षा नै विद्यार्थीहरु यहाँ आउनुको प्रमुख कारण मान्छन् । अमेरिका र बेलायतमा भन्दा अष्ट्रेलियामा पढाई सस्तो भएकाले अष्ट्रेलिया एसियन विद्यार्थीहरुको प्रमुख गन्तव्य भएमो उनीहरुको तर्क छ । – नेपालीपत्रबाट